Wayyaaneen tokko buutee tokko bakka buute, malee goomittan tokko hin jirtuu waliif birmadhaa! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooWayyaaneen tokko buutee tokko bakka buute, malee goomittan tokko hin jirtuu waliif birmadhaa!
“Hidhaan godina Booranaatti jabaate Qeerroo biyyaa baqachiise.
Godina Booranaatti marsaa 3ffaa namoota hidhuutti jiran.
Marsaa duraa ji’a Caamsaa,2019 keessa namoota haga 500 olii qabanii Xoollayiitti geessan. Adoo warrii sun tokkolleen hin galinu marsaa 2eessoo Qeerroo namoota 300 olii qabanii gara Sanqalleetti geessan. Isan kana ammoo wax 28,2019 naannoo Gincii bakka Oloonkomii jedhamutti Qeerroo baayinnaan 72 ta’an konkolaataan qileetti naquuf yaalii godhameen namoonni 72nu midhaaman. Namoota 14 irra balaan cimaan dhaqqabee jira. Namoonni 58 balaa sasalphaan yaala tokko malee hidhaatti darbataman, kanneen balaa cumaaf saaxilamanis akka hin yaalamne godhanii mana hidhaatti dhukkubsachaa jiru.
Hidhaan marsaa 3ffaa ammoo barattoota Qoollajjiifi Yuunibarsitii adda addaa irraa boqonnaaf gara maatii galan irratti geggeeffamaa jira.
Sababa kanaan Qeerroon baayyeen bosonaatti baqachaa jiru. Biyyii Keeniyaas akkuma durii dabarsitee sabboontota keenna kennaa waan jirtuuf bosona filannee jedhan Qeerroon kun yoo yaada isaanii barreeffamaan maatiif Ergan.”
Oromiyaa Bahaatti ABO deggeertu jechuun jimilaan hidhaatti guuramaa jiru . Kanneen kana keessaa magaalaa Calanqoorraa guyyaa har’aa
1 Abdallaa yuuyaa
2 Mammad sham Abrahim
3 Oromiya Abdurahman
4 Nadhi Ahmad muume
5 Mahamad juhar habibe
6 Adnan Ahmed sheka
7 Mahamad Abdi sa.ice
8 Kadiir asrate mashasha
9 Hamza Abdurahman Mume
10 Qananii nasiibuuu lamma
Jedhaman hidhamanii jiru .
Qophii Addaa tamsaasa kallattii ONN dhaan
…. Oromiyaa Kibbaa tti eegalee Oromiyaa Lixaa fi Giddugaleessa Oromiyaatti bakkawwan muraasarratti Kan geggefamaa jiru Mootummaan Hiriira balaaleeffanna jedhu ilaalchisee jiraatota giddugaleessa Oromiyaa Aanaa Ilfata, Coobi, Waddeessa , Qeerroo Magaalaa Amboo fi Aanagawwan Mootummaa bulcha Aanaa Coobi, Ilfata fi Kantiibaa Magaalaa Amboo , Dhimma kana ilaalchisuun Ajaja WBO Zoonii giddugaleessaa J/ Sanyii Nagaasaa , hidhamuu deggeertootaa , miseensota ABO fi cufamuu waajjira ABO waliin wal qabatee immoo waajjira ABO Finfinnee irraa MSG -GS ABO Obbo Mikaa’eel Booran waliin goonee qophii addaa ONN tti isiiniif dhiyeessina caqasuu hin dagatiinaa.
Marii kana keessattis aangawwan mootummaa caasaa koo irra rakkootu ga’aa jira jedha, ummatni garuu hidhatoota mootummaatu nu hiraarsaa jira jedhu, dabalatanis humnaan hiriira ba’aa jirra jechuunis komatu, Kan Mootummaan himatuuf ammoo Qondaltoonni WBO lakkii WBO of ittisa godhaa jira malee caasaa mootummaarratti rakkoo ga’e hin qabu , Karaa nagaa dhabnee filannoo qawweetti galle Kan lollu sirna malee nama miti nuti ummata hiraarsuu miti gara keenyatti ummatni Baqataa jira jedhan…. maatii j/Sanyii dabalatee kan j/Marroo hidhamanii jiru kannen kun manguddoodha isa jedhuufis kun haamilee Qondaaltota WBO hin hanqisu qabsoo karaa nagaa dhaaf Mootummaan yaada yoo qabate WBO qophiidha jechun ibsan…. hogganni ABOs jimilaan miseensonni fi deggertoonni hidhamaa jiru kun torban darbee bayyinaan kan 1991 chaarteeraa fakkata , Mootummaan waliin iddileen waliigaltee keenya hojiitti hiiku tattaffannus waan ifatti dubbatamuu fi lafa jalaan dalagamu adda ta’ee mul’ata Kan ummatni ABO dubbachuu irraa of qusate jedhuus fedhii nagaa irraa kan ka’ee jedhu obbo Mikaa’eel…. guutummaa gabaasaa kana Qophii keenya Addaa irraa argattu
Qixxeessaa Lammii | Waxabajjii 07, 2018 Dhaabni tokkichi qabsoo saba Oromoo faffaca’a irraa bakka tokkotti…
Cabaan Lamaan Fayyaa Tokko Tahuu hin Danda’u! Damee Boruu tin: Muddee 2, 2018 Yaroo hooggantoonni…
Tokko Hin Tollee Budaan Lakkuu Dhaltee Damee Boruu tin, Adoolessa 21, 2018 OPDOn jalqabaa kaasee…
Time for Ethiopia to Bargain with Sidama over Statehood